Faah Faahin kasoo baxaysa doon tahriibayaal Somali kula qalibmatay… | raascasayrmedia.com
← Allaha ha u naxariistee nabadoon Saalax Cabdisalaam Axmed[Faqash] ayaa caawa kooxo hubaysan ay ku dileen gudaha magaalada Bosaso.
Dibadbax looga soo horjeeday Shirka Nairobi oo ka dhacay Muqdisho(Sawiro ) →
April 7, 2011 · 9:57 pm
Faah Faahin kasoo baxaysa doon tahriibayaal Somali kula qalibmatay…
Faah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa doon dad Soomaali ah ay saarnaayeen oo ku qalibmatay badda u dhaxysa Talyaaniga iyo Liibiya xili ay doonayeen inay Tahriib ku galaan dalka Talyaaniga.
Sida ay sheegayaan ciidamada ilaalada ee xeebaha dalka Taliyaaniga muhaajiriin isugu jirta Soomaali iyo Bangladesh ayaa lagu la’yahay xeebaha u dhaxeeya dalalka Talyaaniga iyo Libiya.
Muhaajirinta la la’yahay ayaa tiradoodu lagu sheegay in ka badan 250- kuwaasi oo 15-ka mid ah meydadkooda laga helay xeebaha dalka Talyaaniga, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in doonidii ay saarnaayeen kula dagtay Xeebta ku dhow Magaalada Lambadusa ee Koofurta Talyaaniga.
Sarakaalka ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa uu u sheegay Wakaaladda wararka ee AFP in shilka doontaani uu yimid ka dib markii ay kaceen duufaano iyo dabeylo aad u xoogan taasi oo keentay in doonida ay degto waxaana uu intaasi ku darey in iminka ay socdaan hawlo lagu samataibixinayo dadkii saarnaa doonida iyadoona ay yartahay fursadda ah in dadkaasi nolol lagu helo.
Ma ahan markii ugu horeysey oo ay tahriibayaal Soomaali ah dooni kula qalibanto Xeebaha u dhexeeya Talyaaniga iyo Liibiya, iyadoo wali ay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo doonaysa inay u Tahriibaan dalal kale maadaama ay dalka Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan.